Banyere Anyị - Jiangxi Aili New Material Technology Co., Ltd.
Ogo dị elu, ọrụ enweghị nchekasị, akụrụngwa akụrụngwa Aili dị arọ agaghị ekwe ka ị daa.
Aili Nrụpụta etinyela aka na nkedo na mpaghara ibe ya site na 1980, ugbu a mgbe afọ 40 nke mmepe na ihe ọhụrụ na-aga n'ihu, Aili aghọọla onye isi China na onye nrụpụta ụwa ama ama nke GET akụkụ ahụ.
Ngwa Aili: Jiangxi Aili bụ ọkachamara na R&D, mmepụta na ịre ahịa nkedo na ịkwa akwa GET akụkụ ahụ. Karịsịa na -emepụta bọket, ripper, ezé, ihe nkwụnye ọkụ, akụkụ ihe, akụkụ mbepụ, bit njedebe, pin & retainer, bolt & nut wdg.
Isi uru Aili bụ Ịhụ onye ọrụ na ndị ahịa ọ bụla n'anya, na-enye mmadụ niile mmeri ma na-enye onyinye na ọha.
Usoro nhazi nke Aili zuru oke, R&D ọkachamara, ngalaba ọrụ aka, ngalaba QC, ngalaba azụmaahịa 24hours na ngalaba ahịa, ndị ọrụ nwere ahụmịhe. Aili na -eche mgbe niile ihe ndị ahịa na -eche, nye gị azịza zuru oke, ka ị nwee ike zụta na -enweghị nsogbu ọ bụla.
Nnwale Ngwa Aili na Ọnọdụ Ngwa:
“Ọdịdị dị elu, Aili mere” bụ ụkpụrụ mmepụta Aili mgbe niile. Aili na-agba mbọ mgbe niile ịnye ndị ahịa niile ngwaahịa dị elu na ọrụ kacha mma.
N'okpuru bụ Aili na -ere nnwale ripper D11 na atụnyere usoro, ọ ka dị mma ka elekere 150 gachara. Ngwa Aili ugbu a bụ nke a na -ejikarị eme ihe na Mwube na Ngwuputa. Dị ka 4T5502 ripper na shọvel mining & shọvel eriri eriri eletrik na Dexing Jiangxi Shangrao Dexing Copper Mine.